Tantaran'ny Adobe Illustrator | Famoronana an-tserasera
Tantaran'ny Adobe Illustrator
Amin'ny rafitry ny faha-30 taonany, Ny Adobe Illustrator dia mirehareha amin'ny maha fitaovana azy izay nanova ny endrika sary rehefa nosokafany ny varavarana hamoronana ireo sary vongana efa be mpampiasa. Ny lalana nolalovana dia lava ary tsy isalasalana fa sarotra, tsy very maina izy io dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina sy tiana indrindra nataon'ny mpamorona sy ny matihanina amin'ny sary sy sary.
Nanondro an'i Adobe Illustrator izy, izay amin'izao fotoana izao maherin'ny 180 tapitrisa ny sary nalaina isam-bolana tamin'ny alàlan'ny fampiasana azy ireoRaha ny marina dia tsy azo iadian-kevitra ny fisian'ny orinasany fanontana satria hitantsika amin'ny fonosana, takelaka, fonosana sns.
1 Andao hodinihintsika kely ny tantaran'ny Adobe Illustrator
2 Tonga ny dikanteny mandeha amin'ny fotoana mifanaraka amin'ny orinasa sy fitaovana hafa
Andao hodinihintsika kely ny tantaran'ny Adobe Illustrator
Teraka tamin'ny 1987 izy io, nanokatra ny làlana ho amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny famoahana nomerika sy ho an'ny tontolon'ny endrika sary nalain'ny mpamorona tsy am-pihambahambana hamoaka ny sary mamorona ary miteraka sanganasa kanto nomerika tsy tambo isaina izay naharitra ny fotoana ary mbola mipoitra hatrany noho ny fampifanarahana sy fivoaran'ny fitaovana.
Ny iray amin'ireo tombotsoan'ny Adobe Illustrator hatramin'ny voalohany dia ny namela ny fampifanarahana ny endriny rehetra amin'ny habe samihafaNa hanaovana pirinty na ho an'ny efijery dia namela ny fanitsiana ny volon'ny radius, ny sakany, na ny haavon'ny tenany, izay iray amin'ireo singa matanjaka indrindra hatramin'ny namoronana ilay fitaovana.
Rehefa nipoitra ny Adobe Illustrator, Tsy nisy afa-tsy tamin'ny endriny ho an'ny Apple Macintosh; Tsara ny milaza fa Illustrator dia rindrambaiko novolavolain'i Adobe, taorian'ny fahombiazany ho Postcript.
Tonga ny dikanteny mandeha amin'ny fotoana mifanaraka amin'ny orinasa sy fitaovana hafa
Nanomboka teo dia nisy fiovana tao amin'ilay fitaovana hanatsarana hatrany, eny, tsy very ny tena ilaina. Ny iray amin'ireo fanovana lehibe dia fitomboan'ny hafainganam-pandeha, hatramin'ny androany dia avo 10 heny haingana noho ny taona lasa izy io.
Antony iray hafa namaritra ny toerana voafaritry ny Adobe Illustrator eny an-tsena ny fanjavonan'ilay mpifaninana aminy Freehand, taorian'ny nahazoan'ny Adobe ny orinasa tompon'andraikitra tamin'ny famoronana azy Macromedia ary nampiroborobo ny fitaovany manokana mandra-pahatongany nitondrany azy ankehitriny.
Hankalazana ireo 30 taona an-tanan'ireo matihanina amin'ny fanoharana, Adobe Illustrator dia namoaka fanavaozana ny programa, izay iray amin'ireo pluse manaitra indrindra dia ny fahafahan'ny mpampiasa sary voa avy amin'ny Illustrator mihitsy ary izany dia avy amin'ireo mpampiasa ireo ihany, izay efa nangataka an'ity fanatsarana ity efa ela.
Miaraka amin'ity fanavaozana ity, eny hamonjy fotoana be dia be ianao ary tsy mila mankany amin'ny programa hafa intsony ianao, amin'ny fomba hoe rehefa mampiasa sary ianao dia hanana safidy hamaky azy io ary hanitsy ny mpanara-maso hanao fanapahana tsotra, ny ampahany sisa amin'ilay sary voalaza dia hariana, izay adika amin'ny fanaovana ilay rakitra tsy dia mavesatra loatra.
Ny fanatsarana hafa dia izany Izy ireo dia mampiditra takelaka loko vaovao amin'ny fitaovana miaraka amin'ireo safidy hamoronana loko, hitahiry azy ireo ary haka azy ireo amin'ny rindranasa hafaRaha mampiasa ny programa Adobe ny mpampiasa, sambory ny loko izay itehirizany avy eo, azony atao ny miandry azy ao amin'ny Adobe Illustrator hampiasa azy ireo rehefa ilainy izany. Ny famoronana ny lohahevitra loko dia tohanan'ny fanampiana manan-tsaina.
Ity kinova vaovao ity dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny fampiharana Creative Cloud na amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao ao amin'ny fitaovana Illustrator.
Antenaina fa ity fanavaozana ity dia miaraka amin'ny zavatra hafa, tsy azonao antenaina kely kokoa avy amin'ny Adobe ary izany no antony nahatongavan'i Adobe InDesign CC miaraka amin'ny interface efa nohavaozina tanteraka mba ho mora kokoa ny miasa eo amin'ireo rindranasa samihafa sy fandaharana famolavolana hita ao amin'ny Adobe.
Izy io koa dia manana ny sasany amin'ireo takelaka misy azy, toy ilay iray amin'ny famoronana rakitra vaovao, nohavaozina tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Tantaran'ny Adobe Illustrator
Futuracha Pro, karazan-tsoratra am-boalohany izay miova rehefa manoratra ianao
Mamorona blur amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny Adobe Premiere